शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक औषधिमा उपभोक्ताको आकर्षण – Health Post Nepal
२०७५ भदौ १८ गते १३:१०
सिंहदरबार वैद्यखाना समितिले उत्पादन गर्ने शक्तिवर्धक औषधिमा उपभोक्ताको चासो बढेको छ । वैद्यखानाका उत्पादनमध्ये शिलाजित सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गरेको छ ।
सिंहदरबार वैद्यखाना नेपालको सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक हो । यहाँका ग्राहकले दैनिक खरिद गर्ने औषधिमा सबैभन्दा बढी शिलाजित, च्यवनप्रास, तुलसी चिया, अभिपत्तिकर र सन्दीपन रहेको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्धनिर्देशक डाक्टर वंशदीप शर्मा खरेल बताउँछन् । दैनिक करिब सय जनाले वैद्यखानाबाटै शिलाजित खरिद गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । सिंहदरबार वैद्यखाना देशको एक मात्र सरकारी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक हो ।
‘गत आर्थिक वर्षमा मात्र हामीले ८३ लाख ५२ हजार ८ सय ११ रुपैयाँबराबरको शिलाजित बिक्री गरेका छौँ,’ डा. खरेलले भने, ‘अहिले बजारका आयुर्वेदिक औषधि पसलमा समेत यसको बिक्री बढेको पाइएको छ ।’
शिलाजितले शरीरमा इम्युनिटी पावर र शक्ति बढाउने काम गर्छ । यसका अतिरिक्त यसले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्ने, हर्मोनलाई नियन्त्रण गर्ने, दुखाइ कम गर्ने, मधुमेह नियन्त्रण गर्ने डा. खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार यसले क्यान्सर र दुब्यसनीबाट पनि बचाउँछ । शिलाजितले यौनक्षमता वृद्धि गर्ने भएकाले पनि यसको माग अत्यधिक भएको डा. खरेलको अनुमान छ ।
‘गत आर्थिक वर्षमा मात्र हामीले ६ लाख रुपैयाँबराबरको शिलाजित बिक्री गरेका छौँ,’ डा. खरेलले भने, ‘अहिले बजारका आयुर्वेदिक औषधि पसलमा समेत यसको बिक्री बढेको पाइएको छ ।’ शिलाजितपश्चात् ग्राहकले बढी खोज्ने औषधिमा अभिपत्तिकर, च्यवनप्रास, तुलसी चिया, सन्दीपन छन् । बिक्रीका हिसाबले अभिपत्तिकर दोस्रो स्थानमा छ ।
आयुर्वेदिक औषधिमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ । विगत केही वर्षदेखि मानिसमा आयुर्वेदिक औषधिप्रतिको चेतना बढेका कारण पनि यसको माग बढेको खरेलको बुझाइ छ । शिलाजित खरिद गर्न धेरैजसो ३५ वर्षमाथिका उपभोक्ता आउने गरेको उनी बताउँछन् ।
आयुर्वेदिक औषधिले साइड इफेक्ट गर्दैन । हिजोआज उपभोक्ता अग्र्यानिक तरकारी र आयुर्वेदिक औषधितर्फ अकर्षित भएका छन् । मेडिकलमा पाइने अन्य औषधिभन्दा आयुर्वेदिक औषधि फरक रहेको खरेलको दाबी छ । ‘हामीले आयुर्वेदिक औषधि बनाउन केही आधुनिक मेसिनहरु राखेका छौँ । ट्याबलेट, पल्भोराइज, मोफलफर्नेस, सिफ्नर, ग्य्रानुएल, मिक्स्चर, लेभलिङ, ड्रायरलगायत मेसिन हामीसँग छन् । हामी शुद्ध जडीबुटी मिलाएर औषधि निर्माण गर्छौं,’ डा. खरेल भन्छन् ।